सेयर बजार एकाएक किन भयो यसरी प्रभावित ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyसेयर बजार एकाएक किन भयो यसरी प्रभावित ?
सेयर बजार एकाएक किन भयो यसरी प्रभावित ?
काठमाडौं : केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको वर्तमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि सेयर बजार बेस्सरी प्रभावित भएको छ । हाल लगानीकर्ताले सेयर धितोमा ७०% सम्म कर्जा पाउँदै आएका छन् । १२० दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानेर कर्जा दिइने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत धितो कर्जाको वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने भनेको छ ।
सोही कारण आइतबार बजार बेस्सरी प्रभावित भएको हो । यस्तै, केहीले कालोधन भित्रिएको र धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले छानबिन गर्दैछ भन्ने हल्ला पनि फैलाएका छन् । यसले पनि बजारलाई केही हदसम्म असर गरेको हो । तथापि, आम लगानीकर्ता यस्ता हल्लाका पछि लाग्नु हुँदैन । यता, लगानीकर्ताहरुले भने अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा सेयर धितो कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न नहुने बताएका छन् । ब्रोकर कमिसन पनि घटाउन उनीहरुले दबाब दिएका छन् । सूचक घटे पनि खदिरबिक्री रकम निकै उत्साहप्रद रहेको छ । यसअघि बढेको बजारबाट केही ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्दा पनि बजार प्रभावित भएको हो ।
यसबाहेक बजार विरोधी केही हल्लाहरु फैलाइएकाले पनि लगानीकर्ता त्रसित भएको अनुमान छ । १ बजे आसपासमा नेप्से करिब ७० अंकले घटेको छ भने खरिदबिक्री रकम ४ अर्ब ३८ करोड नाघिसकेको छ । खरिदबिक्री रकम निकै उत्साहप्रद हो ।
साताकाे पहिलाे दिन नकारात्मक सर्किट,४ घण्टामा नै बन्द भयाे मार्केट
साताको पहिलो कारोबार दिन बजार खुलेको ४ घण्टा नपुग्दै नेप्से सूचक ६ प्रतिशतलेघटेपछि आइतबारको लागि शेयर कारोबार बन्द भएको छ। आइतबार बजार खुलेदेखि नै घट्न थालेको बजार २ः१३ मा नै प्रतिशतले घटेपछि आजको लागिशेयर कारोबार बन्द भएको हो। सेयर बजार एकाएक किन भयो यसरी प्रभावित ?काठमाडौं : केन्द्रीय बैंकले …
Previous article‘सुर्य थापालाई दलालको संख्या दिँदै यस्तो भने गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणी सुवेदीले
Next articleयसरी खानुहोस् ओखर जसले थुप्रै गम्भीर रोगहरुबाट बचाउछ